वकिलका उपद्रो ,लात्ती हान्नेले पत्रकारको कार्ड मागे लात्ती खाने डाँको छोडेर रोए ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
वकिलका उपद्रो ,लात्ती हान्नेले पत्रकारको कार्ड मागे लात्ती खाने डाँको छोडेर रोए ?
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजिनामा दिनु पर्ने विषय चर्किदै जाँदा आज हात पात सम्म पुगेको छ ।
आज नेपाल बार एशोसिएसशनको भवन परिसरमा दुई जना अधिवक्ताबीच नै कुटा कुट भएको छ। अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालले इजलास चल्नुपर्ने राय राखेर मिडियामा आफ्नो भनाई राखिरहेको बेलामा अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले उनीमाथि प्रहार गरेको बताईएको छ । कुटाई खाएका अधिवक्ता चुँडालले भने आफू कानूनी उपचारमा जाने बताईसकेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर बारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। न्यायाधीशहरुले पनि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तर, कानून व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । केही कानून व्यवसायीहरुले यसरी न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।
वकिल माथी हातपात गर्ने अर्का वकिल विराट न्यौपानेले त्यस लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदा पत्रकारको कार्ड समेत हेरेका थिए । किन हात हालेको भनेर प्रश्न गर्दा तपाई कस्तो पत्रकार हो कार्ड देखाउँनुस भन्दै उनले कार्ड हेरेका थिए ।
तपाईले नसा सेवन गर्नु भएको छ की के हो भन्दा उनले तपाईले चाँही गर्नु भएको होला भन्दै मुख मुखै लागेका थिए । हातपात गरेको नभई नसियत मात्रै सिकाएको जिकिर गर्दै न्यौपानले पर्यो भने फेरी पनि हा न्ने बताएका छन् ।
यता पिटाइ खाने वकिल भूमिनन्द चुँडाल भने बार परिसरमै डाँको छोडेर रोएका छन् । आफु माथी हा त पात हुँदा पनि बारका पदाधीकारी कोहि नबालेको भन्दै उलने यो व्यवस्थानै समाप्त हुन पर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्षका उनी जबरालेनै गणतन्त्र सिध्याएर राजतन्त्र ल्याउँने बताउँदै रौएका थिए ।